यसरी डुबे जलविद्युतका लगानीकर्ता, कसको कति छ शेयर मूल्य ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
फागुन २७, २०७४ | आजको अर्थ
काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीलाई शेयर बजारमा ब्लू चिप्सको रुपमा लिइन्थ्यो । जमाना राम्रो थियो । चिलिमेको शेयर भनेपनि मानिसहरु हुरुक्क हुन्थे र भन्थै जसरी भएपनि चिलिमेको शेयर खरिद गर्नुपर्छ । चिलिमेको नाममा रसुवाका केही जनताको राम्रै आर्थिक स्रोत पनि बन्यो । तर पछिल्लो समय चिलिमे कम्पनीको शेयर पनि ७०० को हाराहारीबाट अगाडि बढ्न सकेन ।
कुनै समय तीन हजार २०० सम्म प्रतिकित्ता शेयर कारोबार भएको चिलिमे कम्पनीको शेयर घटेर बजारमा नकारात्मक छाप पारिरहेको बेला अन्य जलविद्युत् कम्पनीको शेयर औसतमा ३०० को हाराहारीमा रहेको छ । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी जुटाउन स्थानीयलाई १० प्रतिशत र आम नेपालीलाई १५ प्रतिशत शेयर दिने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । केही कम्पनीले मात्रै लगानीककर्तालाई उच्च प्रतिफल दिन सकेको छ । अधिकाशं कम्पनीले लगानीकर्तालाई राहत त परै जाओस् लगानी गरेको रकम समेत फिर्ता नहुने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।
सत्र कम्पनी सूचीकृत दुई मात्रै नाफामा
नेपाल स्टक एक्चेन्जका विभिन्न १७ जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । ती मध्ये हालसम्म चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी , अपि पावर कम्पनी बाहेक अरु कम्पनीको शेयर एकदमै न्यून बिन्दुमा आइपुगेको छ ।
जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु आकर्षक मानिए पनि पछिल्लो समय यो सर्वसाधारणका लागि चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । कही कतै पनि प्रतिफल र नाफाको गुन्जायस छैन । कारण जे जे भएपनि जलविद्युत्मा नागरिकको लगानी बालुवामा पानीको हालतमा पुगेको छ ।
कसको कति छ शेयर मूल्य
स्टकमा सूचीकृत कम्पनी मध्ये युनाइटेड मोदी हाइड्रको शेयर प्रतिकित्ता रु १८८ मा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै सिनर्जी पावरको रु १४६, सानिम माईको ३५५, रिडी रु १३८, ङादी रु २०९, नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट रु १९६, नेशनल हाइड्रो रु १०३, खानीखोला रु १३३, हिमालयन पावर पार्टनर रु ३१६, दिव्यश्वरी रु १२७, चिलिमे रु ८०२, छ्याङदी रु १६०, बुटवल पावर कम्पनी रु ५००, बरुण हाइड्रो रु १७७, अरुण भ्याली रु १७८, अरुण काबेली रु २६९ र अपि पावर कम्पनीको रु ३५४ मा काराबार भइरहेको छ ।
अन्य बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको तुलनामा जलविद्युत्को शेयर मूल्यमा बढी गिरावट आउन थालेपछि समस्या देखिएको हो । रु सयमा एक कित्ता सेयर पाइने हुँदा हरेक कम्पनीको साधारण सेयर निष्कासन हुँदा सर्वसाधारणको भीड लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको विकासका कारण घरमै बसेर पनि जुनसुकै कम्पनीको शेयरमा सजिलै लगानी गर्न सकिन्छ । तर बजारमा जलविद्युत् क्षेत्रको शेयर नकारात्मक र न्यून बिन्दुमा पुगेपछि लगानीकर्तामा निराशाको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ ।
जलविद्युत्मा लगानी गर्ने बढी डुबे
पछिल्लो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने नै सबैभन्दा बढी डुबेका छन् । शेयर कारोबारमा संलग्न हुनेले सजिलै प्रतिफल प्राप्त हुने मनोविज्ञानका आधारमा लगानीकर्ताले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने गरेका छन् । आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने प्रवृत्तिका आधारमा एकै निमेषमा अर्बौ रुपैयाँ घाटा लाग्ने गरेको छ ।
आँखा चिम्लेर पैसा हालेका कम्पनीले भविष्यमा कति प्रतिफल दिन्छन् वा कति कमाउँछन् भन्ने हेक्का राख्दैनन् । जसको कारण वर्षौंसम्म प्रतिफलको आशमा बसेका हुन्छन् । प्राथमिक वा साधारण सेयरमा लगानी गर्नेले ढिलो चाँडो केही कमाउने सम्भावना हुन्छ । तर, लाखौं वा करोडौं रुपैयाँ दोस्रो बजारमा हालेका व्यक्ति भने एकै झट्कामा सडकपतिमा रुपान्तरण हुने गरेका छन् ।
बोर्डको कडाईले पनि गरेन काम
नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निस्काशका सम्बन्धमा कडा नीति अख्तियार गर्यो । मनलाग्दी तवरले वित्तीय अवस्था खराब भएका कम्पनीलाई शेयर निस्काशन गर्न नदिने भएपनि बजारमा त्यसको कुनै प्रभाव देखिएन । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले खराब कम्पनीले प्राथमिक शेयर निस्काशन नगरुन भन्ने अभिप्रायका साथ जलविद्युत् कम्पनीलाई साधारण शेयर निस्काशनमा कडाइ गरिएको बताए । तर बोर्डले उक्त निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन । बरु भटाभट साधारण शेयर निस्काशनको अनुमति दिइयो ।
नेप्सेमा अहिलेसम्म १७ जलविद्युत कम्पनी मध्ये चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी, सानिमा माई, बुटवल पावरलगायतको मात्रै दोस्रो बजारमा शेयरको मूल्य तीन सय माथि छ । अग्रस्थानमा चिलिमे कम्पनीको प्रतिकित्ता रु ८०० माथि रहेको छ ।
सेयर बजारमा हालसम्म वित्तीय क्षेत्रकै वर्चश्व छ । विस्तारै जलविद्युत यसैको दाँजोमा आउँदैछ । तर, जलविद्युत भन्नासाथ आँखा चिम्लेर पैसा हाल्ने होडले सर्वसाधारणको रकम नराम्ररी डुबेको छ ।